Candida notumwe: zvichibvira kurapwa
Zvinozivikanwa kuti tupukanana vagere womunhu muviri chaizvo kubva pakuzvarwa kwake. Vanotanga kurwisa achangoberekwa kare panguva iyoyo, sezvo chinofamba kuburikidza kuberekwa canal, uye nokukurumidza "kubatwa" muviri wose, mabhakitiriya anogona kuwanika paganda, zvipikiri, mucous Kamudzira mumuromo uye Airways, kuti ura uye mudumbu. Ndezvomuzvarirwo Naizvozvo, kuti kana Candida notumwe kwakawanikwa mukati mai, ndizvo chaicho kukanganisa utano mucheche.
Maererano vanachiremba, vanopfuura hafu vanhu havazivi kuti izvi ndizvo "kunowanzotangira" pamusoro notumwe. Utachiona ava eukaryotes boka. Chimiro chavo uye nzira kufanana kwevanhu kubereka. Kusiyana utachiona hunokuvadza dzakashandisa chero zvakatipoteredza. Candida notumwe kazhinji kukanganisa vanhu, kutambura kubva cheshuga, gastritis, vhitamini kushaikwa uye vakaderera kutapata. Candidiasis anogona kuva varwere kugamuchira mishonga uye kunanzvana pamuviri. Chimwe precipitating chinhu vanachiremba funga kunyanya kudyiwa shuga. Notumwe "muedzo" ropa shuga. Kuderera kusvikira muviri uye kuita kuti kukura kufutisa.
Candida notumwe kungakonzera zvakasiyana siyana zvirwere. Vose vari pamwe zviratidzo zvakadai pakarepo kurasikirwa ndangariro, kufunganya, dumbu marwadzo, zvomudumbu matambudziko, kutemwa nemusoro, kakawanda cystitis. Chimwe chiratidzo ngozi - kunaka ye zvihwitsi. Kunyanya vachinyatsoongorora zvakaongororwa pamberi chakuvhe inofanira vanhu vane sema zvirwere.
Kana uri kuona apa zviratidzo, unogona kuva vanofungidzirwa ari chakuvhe Candida pamwe Mhedziso mukana. Treatment muchiitiko ichi, asi hahuzongoparari atanga nechirwere kunosimbiswa nachiremba wako. Kuti aite izvi, unofanira kutora bvunzo ropa, weti uye ganda nemiedzo kupfuura. Doctors kusiyanisa pakati mhando mbiri chirwere: pemvura uye zvazvinoita zvomukati. The maitiro rokutanga chirwere cheshuga uye vanhu vakawanda vari kufuta. Saka notumwe Candida richiratidzwa somunhu mapundu pamusoro ganda uye anogona kuburikidza nezuva. Candidiasis zvomukati kupararira panguva usina kuzvidzivirira pabonde. Pakati vakawanda zviratidzo zvingafananidzwe kutaurwa mamirire kuvaviwa nokupisa manzwiro ari kuzasi.
Kazhinji chirwere ne chakuvhe Candida iri dumbu. Izvi hazvishamisi - mushure zvose, muviri uyu chaiyo maberekero pasi ose zvirwere. Treatment muchiitiko ichi panofanira huru mbiri: yavaipora pamusoro intestinal microflora uye zvaidiwa inokosha antifungal zvokudya. Zvinofanira kurangarirwa kuti hwokuponesa zvakakwana iwe zvimwe zvinoda nguva yakawanda, nokuti chakuvhe anokwanisa kutora zvakasiyana-siyana uye "kuchinja" kuti imwe zvinodhaka. Vamwe vanachiremba kunyange kunzi candidiasis chirwere chisingarapiki, asi hazvisi. Chinhu chikuru - kuomerera zvakarurama kusvika. Kwenguva refu kupodza? Pamwe zviri mune kusimba kutapata kana kushaya zvokudya zvinovaka muviri. Uchazoti nokusingaperi kurega shuga, mbiriso nezvinogadzirwa nomukaka.
Zvirwere nzeve dzavo kurapwa.
Teerera muviri wako: Zviratidzo hosha chiropa
Chalazion vana. Kurapa chirwere ichi. The chalazion wakasiyana bhari?
How kubvisa underarm ziya?
Firimu "9 mamita": vatambi uye mabasa
OPG "tsinga". Takarongwa tsotsi boka Kazan Haidar Zakirov
Mapiritsi pamusoro pamuviri pashure usina kuzvidzivirira kurara. Birth kuzvidzora mapiritsi: zita, wongororo, mutengo
Sangano dzakawanda chokufambisa - runovimbisa yepamusoro
Rabha bonde - yakanakisisa kudzivirira motokari yako
Chii chinonzi Schengen vhiza
Munamato amai utano chevana akasimba kupfuura mazango zvose uye mazango
Zuva necheSalvic Language Wakanyorwa sechiratidzo kubatana pamapatya avanhu
Amazing soyabhinzi. Kubatsira uye pokukuvadza kuti muviri womunhu.
Biography Pavla Barshaka: zvinokosha ndipo upenyu mutambi
Unganidza furo jenareta nemaoko ako? Zvichida!